AeroLeads: Fantaro ireo adiresy mailaka Prospect amin'ity Chrome Plugin ity | Martech Zone
AeroLeads: Fantaro ireo adiresy mailaka Prospect amin'ity Plugin Chrome ity
Na firy na firy ny tambajotranao, dia toa tsy nifandray tsara mihitsy ianao. Indrindra rehefa miara-miasa amin'ny fikambanana lehibe ianao. Matetika ny daty fifandraisan-davitra dia lany andro matetika - indrindra satria manana raharaham-barotra lehibe ny orinasa.
Ny fahaizana mijery fampahalalana mifandraika amin'ny fotoana tena izy avy amina loharano mivaingana dia tena ilaina amin'ny ezaka ataonao ivelany. Aerolead dia serivisy miaraka amin'ny Plugin Chrome miaraka aminy izay ahafahan'ny ekipa mpivarotra anao hanao izany.
AeroLeads mamela ireo matihanina mivarotra ivelany hikaroka fifandraisana amin'ny orinasa na amin'ny alàlan'ny plugin Chrome azy ireo - alao ny mombamomba azy ireo izay ao anatin'ny tobim-baovaon'izy ireo sy mifandraika amin'ny mombamomba anao tadiavinao.
Ny fampiasana ny Aeroleads Chrome Extension dia tsotra:
mametraka ny Chrome extension, ampandehano, ary karohy ao amin'ny AeroLeads, Google, LinkedIn, Crunchbase, AngelList, sns.
Safidio ny prospect relevan ary afindra amin'ny AeroLeads ao anaty lisitry ny prospect.
AeroLeads dia haka ny antsipiriany rehetra momba ny orinasa na olona izay misy ny mailaka, anarana, nomeraon-telefaona ary mombamomba anao.
Azonao atao aza ny mandefa ny lisitra any amin'ny CRM ivelany raha te-hanangana lisitry ny fanantenana ianao any. Ny mombamomba ny fifandraisana dia omena eo amin'ny $ 0.50 isaky ny firaketana. Azonao atao ny mizaha toetra ny plugin amin'ny trosa 10 maimaim-poana.
Aeroleads dia namokatra fampidirana mba hanosehana mivantana ny fampahalalana mifandraika amin'ny kaontinao na amin'ny fitaovana hafa, anisan'izany ny Mailchimp, Salesforce, Insightly, Pipedrive, Zapier, Zoho, Hubspot, ary FreshSales.
Fampahafantarana: Misoratra anarana amin'ny AeroLeads ary mampiasa ny rohy ifandraisanay amin'ny bokotra etsy ambony.
Tags: aeroleadsAPImividy angona fifandraisanamividiana rakitra firaketanachrome extensionChrome pluginfifandraisana listmitadiava mombamomba ny fifandraisanaFresh Salesmahazo mombamomba ny fifandraisanahubspotInsightlylisitra apimailchimpMivoakaPipedrivelisitry ny fanantenanasalesforcezapierZoho
Ny maha-zava-dehibe ny paikadim-barotra amin'ny horonantsary: ​​statistika sy toro-hevitra